A tọhapụrụ Ndị A Na-eji Ahịa Ọhụrụ Media. | Martech Zone
Tuesday, October 20, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Adam Obere
A isiokwu n'isi ụtụtụ a na a mbipụta ndị nchụ nta akụkọ banyere 2009 Cone Consumer New Media Study na-agụ, "Ndị Ọrụ Mgbasa Ozi Ọhụrụ na-anọ na ise na-akpakọrịta na ieslọ ọrụ na sdị Online, elu 32% si 2008."
Nke a abụghị akụkọ na-awụ akpata oyi n'ahụ dịka ọ bụ nkwenye nke ihe ndị ahịa anyị kwenyere na mbụ. Ọ bụrụ na ịnọ n'ịntanetị, eleghị anya ị ga-achọ ịmekọrịta na ụdị ị na-azụ n'ụzọ ụfọdụ.
Mike Hollywood, Cone`s director nke ọhụrụ mgbasa ozi, kwuru na ntọhapụ, “A ka nwere ohere maka ụlọ ọrụ na-eche echiche n'ihu iji guzobe ma nweta uru asọmpi. Dabere na uto nke mmekọrịta onye ọrụ na ụlọ ọrụ, ọtụtụ mkpebi ịzụta na-emetụta mgbasa ozi ọhụụ. Ọ dị ezigbo mkpa ịbanye ugbu a ụgbọ oloko ahụ ahapụla ọdụ ụgbọ ahụ. ”
Onu ogugu ndi ozo bu:
95% nke ndị ọrụ mgbasa ozi ọhụụ kwenyere na ụlọ ọrụ / akara kwesịrị inwe ọnụnọ na mgbasa ozi ọhụụ
89% kwenyere na ụlọ ọrụ / akara kwesịrị iso ndị na-azụ ahịa emekọrịta ihe
58% na-achọ ụlọ ọrụ / akara na saịtị weebụ ọdịnala
45% choro ulo oru / akara site na email
30% chọrọ ịmekọrịta na netwọk mmekọrịta
24% chọrọ ịmekọrịta site na egwuregwu ịntanetị
61% chere na ụlọ ọrụ / akara kacha mkpa na mgbasa ozi ọhụụ kwesịrị ịbụ nsogbu edozi ma nye ozi
Ekwesịrị m ikweta na mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka nkịta ochie. Ọ bụ ya mere m ji chịa ọchị mgbe m chetara na m na-ede maka blog teknụzụ ahịa. Ma dị ka nwa akwụkwọ nke omume mmadụ, amaara m na anyị niile nwere ihe abụọ jikọrọ: anyị na-achọ nkwukọrịta njikọta na anyị nwere mmasị ịme ihe ọhụrụ.
Yabụ, anyị ga-anọgide na-achọ ụzọ ọhụụ iji kpaa, ịkọ akụkọ, ịkekọrịta ozi. Ọ bụrụ na, ezigbo onye na-ere ahịa, ị naghị eji ohere ọhụụ ọhụụ ndị a ka ha na-ebili n'ihi na ị chere na ha dị ntakịrị ma ọ bụ enweghị isi na-abaghị uru, ya ejula gị anya mgbe ị hapụrụ, na-eguzo n'ọdụ ụgbọ oloko ya na ndị ahịa ndị ọzọ nwere ogologo ihu chere na ha ga-arị otu ụkwụ n'ụgbọ okporo ígwè dị elu.
Iji na-agụ ihe banyere ọkụ eletrik mmetụta na ụlọ ọrụ ibu ọrụ na ọhụrụ media dị ka nke ọma na-akpata na ọhụrụ media, lee hapụ na Reuters ma ọ bụ gaa ozugbo na Ihe omumu.
Tags: ntọala ahịa ọdịnayaDeputy
Ọkt 21, 2009 na 8:21 AM
Ọ dị gị ka nkịta ochie, ọnyà, m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ọkụ n'oge m bụ nwa okorobịa, onye na-egwupụta akụ 69 na-agbanwe isi ọrụ m ugbu a m na-arụ ọrụ n'ịntanetị. N'ọtụtụ ụzọ, ha abụọ nwere otu olu nke 'mmanụ ọkụ maka echiche'. Ọ na-amasị m nsonaazụ gị na ụgbọ oloko ọsọ ọsọ na onye ma ọ bụ ndị mmadụ hapụrụ n'ọdụ ụgbọ ahụ, ọ na-ebute ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke. O nwere otu ihe na-agbagwoju m anya na otu ihe si agbanwe ngwa ngwa, a na m eche ebe ebe njedebe ga - akpọrọ anyị niile. Ekele Dape